Simone Zaza oo Torino ka tegaya & kooxaha AC Milan & AS Roma oo iskula dheggan – Gool FM
(Torino) 27 Luulyo 2016 – AC Milan iyo AS Roma ayaa iskula dheggan qannaaska kooxda Juventus ee Simone Zaza, kaddib markii uu iska diidey Wolfsburg.
Laacibkan caalamiga ah ee Talyaaniga ayaa lagu wadaa inuu iskaga tago Torino, balse wuu ka dhaartay Bundesliga, iyadoo lasoo werinayo in laacibkii hore ee Sassuolo uu doonayo inuu sii joogo Serie A, jeer ay Milan isaga u aragto bidaalka Carlos Bacca.
Warsidaha Gazzetta dello Sport ayaa haatan ku celcelinaya in ay Roma sidoo kale kusoo biirtay hardanka laacibka si ay weerarkeeda u xoojiso.
Wakiilka Zaza ayaa hoosta ka xarriiqay inuu laacibku u baahan yahay fursad uu safka hore kagasoo muuqdo, balse wuxuu la tartami doonaa Gonzalo Higuain, Paulo Dybala iyo Mario Mandzukic oo ay wada joogaan Juventus Stadium, taasoo ay sii dheer tahay Gabigol oo laga yaabo inuu ka yimaado Santos.
VERONA, ITALY – JUNE 06: Simone Zaza of Italy looks on during the international friendly match between Italy and Finland on June 6, 2016 in Verona, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
Chelsea oo €45m ku raadinaysa Kalidou Koulibaly